Bedroom - kungcono ekhoneni ethokomele lapho ungakwazi uphumule ngokuphelele ngemva komsebenzi onzima wosuku. Ukulala - umuthi best for ukucindezeleka futhi imizwa ezingemnandi. Leli phupho ukukunikeza lokulala ukhululekile futhi efudumele. Kodwa, sizindle ukuklanywa namakamelo awo futhi imishini yayo, wena cishe ukucabanga ukuthi kunezindlela eziningi ukwenza kube ukhululekile nakakhulu futhi ufihle amaphutha kungenzeka egumbini kukhona. Indlela ukuhlela lokulala, yini imibala kanye izesekeli ukukhetha? Futhi kungenzeka ubumbene ukuhlela lokulala elincane?
Ngaphambi sithola phansi ibhizinisi, cabangela izinto eziyisisekelo:
Musa ukucinanisa egumbini. Ungaxaki wakhe ngezinto ezingadingekile, okuyinto wena cishe abe wusizo. Gcina liyasiza futhi unamathele Minimalism.
Uncamela ukukhanyisa ezithambile, obuseduze ne ethokomele. Lokhu Ukusabalala akuyona hit in the iso bese uvumele ukuba baphumule ngisho nalapho luminaire.
Sebenzisa shades iyashintsha iyaphupha ibe. imibala kakhulu egqamile futhi amaningi sizojabulisa ingqondo kukuvikele eziphumulele. Kungase kungabi okuphawuleka kangako ekuqaleni, kodwa kamuva kuzothinta isimo semizwa yakho nekhono ukusebenza.
Elikhulu amawindi bright - indlela ephelele ukwenza igumbi zibukeke emikhulu futhi licace.
Vumela ifenisha "iflothi" ngenhla phansi, ukuthenga ezinyaweni - ngakho-ke uzophefumula.
Khumbula! Kungcono ukukhetha ekamelweni lokulala, okuyinto ngangokunokwenzeka kusukela emnyango wendlu ongaphambili. Uma une abangabazi ekhaya, ungawavumeli ukuba ahlale embhedeni - kungaholela ekuphazamisekeni kwemikhuba ubuthongo nezinkinga nemlingani wakho. Indlela ukuhlela lokulala (ngezansi) ilungile, cabanga zindima ezilandelayo.
Ngakho, lokulala evamile ihlukaniswe yaba izingxenye 3:
indawo ukusebenza, uma ikhona.
Umbhede - imfanelo ebaluleke kakhulu okulala
Lapho uJesu ebuzwa ngesibonakaliso indlela ukuhlela lokulala, nabaqambi belulekwa ukuba ukhethe embhedeni bese uqale ukwakhela ukubukeka kwayo nokusetha indawo.
Ngakho embhedeni. Ubukhulu bayo incike amavidyo square egumbini futhi isimo umndeni wakho, kodwa khumbula - kufanele uma uthanda. Musa ukuthenga ifenisha, okuyinto, ngomqondo ovulekile ukukhuluma, enhle futhi stylish, kodwa ngasizathu simbe akudingekile ngendlela esilindele yakho.
Okokuqala, shiya isikhala ezinhlangothini embhedeni (for eliseceleni kombhede amatafula kanye neminye imininingwane). Okwesibili, unake lapho zalapho ukukhanya, emafasiteleni, eminyango. Kungcono ukubeka embhedeni ukuze wayenomkhuba emuva egumbini - inikeza enganakile, kodwa udinga umqondo ukuvikelwa, esiza ulale kahle. Kodwa uma lokhu kungeke kwenzeke, umane beka ukuze ubuso bakho akusho ihlatshwa ukukhanya kusukela iwindi futhi akazange ayeke ukulala kukhanyiswe yikona.
Ochwepheshe ukweluleka ukubeka embhedeni okuphambene isicabha noma kwelinye emakhoneni. Lesi sakamuva kubalulekile uma isakhiwo okungezona ezijwayelekile egumbini, okuyinto ikuvumela ukuba usibeka endaweni ethile ngokuphambeneyo. Uma yakho Igumbi 2 amafasitela, yibeke phakathi kwawo, njengoba ngaphansi kombhede ngu iwindi ukubeka engathandeki.
Qiniseka ukuthi kulolu hlangothi (uma ulala wedwa) ukufinyelela embhedeni elinikeziwe.
Ngaphezu kwalokho ukulala kahle ngangokunokwenzeka, inkosi Feng Shui itusa ukulala empumalanga noma wemboni enyakatho, futhi asinalo embhedeni ukuze ukulala izinyawo zakhe ngakubantu umnyango - wenabisela amandla kwesikhathi ekuphileni komuntu.
Futhi, izimfundiso Feng Shui idonsela ukunakekela yakho ukuze esibukweni. Kubaluleke kakhulu ukuba ngesikhathi sokulala ungenaso kubonakala kuzo, ngakho ecabanga indlela ukuhlela lokulala, khumbula lokhu caveat.
Yini ifenisha uzodinga ekamelweni?
Eqinisweni, ekamelweni akudingi okukhulu enkulu ifenisha - izinto ezibaluleke kakhulu kuphela okufanele kungene isikhala khulula egumbini. Ngokuqinisekile badinga etafuleni eliseceleni kombhede lapho ukubeka imininingwane ezahlukene ofiselekayo. Kungcono ube ukuphakama efanayo ne embhedeni, okukuvumela ukuba ngiyibeke phezu isibani edeskini, TV, iwashi le-alamu nezinye izinto ezidingekayo.
A isifuba zangaphansi. It okudingekayo egunjini lokulala, ngoba inganakiwe ukuthengwa akufanele kube. Kufanele ukufanisa design esikhethiwe, futhi ukonga isikhala, uthole eydijithali ne nesibuko - kulesi simo ingasetshenziswa njengendlela itafula sigqoka. Uzokusiza kahle lokwakha lokulala bese ugcine amamitha eziyigugu.
iKhabhinethi Small, ikakhulukazi ekhoneni, kuzokwenza ukuthi singakwazi ukugcina oda egumbini, futhi ngeke sizifake isikhala kakhulu. Kulokhu, kungaba zibukeke bandise Igumbi ngokusebenzisa esibukweni umnyango noma ukugcizelela wezangaphakathi nge olungaphambili lwesonto enhle nge iphethini.
Ngaphezu kwalokho, ekamelweni kungenzeka izingcezu abaningi zefanisha ukhetha at intando bese njengoba kudingeka. Ngakho, uma ufuna ukuhlomisa egumbini lakhe lokulala emsebenzini, kudingeka unakekele ukuthenga etafuleni, izihlalo kanye eydijithali izincwadi noma imibhalo.
I ochwepheshe musa batusa esuka ehhovisi lami lokulala. Kubalulekile kakhulu ukuthi lokulala zikuvumela ukuba uphumule. Ngesizathu esifanayo akufanele ukubeka i-computer ekamelweni (ikakhulukazi ikhompyutha!) Futhi-TV.
Ungawenza kanjani ifenisha ngakwesokudla lokulala?
Lapho ukubeka embhedeni, sesibonile, sekuyisikhathi ukwakha kwelinye igumbi ifenisha. Ngakho, ibhokisi zangaphansi. He is, kuye embhedeni kulungiselelwa. Ngokuvamile bavalelwe bangasebenzi phambi embhedeni emdulini okuphambene. ukubukeka kungemalengiso setha egumbini oyifunayo idayagonali bele ongaphakeme eside. Uma unesithakazelo indlela ukuhlela lokulala ngezinga elikhulu, amaqhinga ezikhethekile azidingeki, njengoba azigcini ku amavidyo.
IKhabhinethi ibekwe udonga olude noma ekhoneni, uma kuyindodana, ekhoneni. Kugcine omkhulu wonge isikhala futhi ngeke ukucinanisa kuze isikhala ifenisha ngokweqile. Kungcono ukuthenga usayizi closet encane nge beya iminyango okudume ngakho namuhla.
Uma kukhona niche encane egumbini ungakha igumbi sigqoka. Izonikeza ithuba uzifihla kwamehlo abo bonke ezibalulekile, kodwa hhayi manje. I umnyango owawuholela kwelinye ikamelo sigqoka, kuyinto efiselekayo ukubeka efanayo emnyango ekamelweni, ukuze akusiyo sigqamile. Indlela anikeze igumbi (lokulala esimweni sethu), ifenisha elincane?
ithebula Ukugqoka. nto Iyadingeka Ukuze abesifazane, ngokuvamile kuthatha isikhala esiningi ekamelweni. Kodwa ingabe ikhona yini imivuzo ukuphonsa ithawula ifenisha oludingeka kakhulu? Ungalokothi! Uma ufuna ukulondoloza isikhala, beka itafula sigqoka eceleni kombhede, kufakwe endaweni yawo omunye amatafula eliseceleni kombhede, okwenezela esihlalweni sakhe kancane. Ngenhla etafuleni, setha esibukweni, uma akufakiwe.
Indlela ukuhlela lokulala kwedeski? Uma udinga ukubeka itafula ekamelweni ngaphandle kokuphazamisa wezangaphakathi, kungasetshenziswa esikhundleni impahla eshalofini ezibizayo, okuyinto usindisa isikhala.
Noma ukuthenga kwedeski encane ezihlangene. Beka kanje:
Ithebula, beka eceleni kombhede kungaba ewindini, evumela ukuhlela.
Yibeke ngokumelene headboard, uma yokugcina kungaqali Abut uvalwe emdulini.
Vimbela off the yokubeka ikhompyutha edeskini. Le nqubo ngeke enze kube nokwenzeka ukuba basakaze izincwadi futhi imibhalo (kanye imbali amabhodwe yezandla).
Indlela ukuhlomisa lokulala elincane?
Indlela ukuhlela lokulala 3 * 3? Kulokhu kuyoba kubalulekile ukusebenzisa amaqhinga ukuze wonge isikhala - elislayidayo etafuleni, embhedeni-transformer, njll Umbhede njalo oluthatha indawo enkulu, bese kudingeke ukuba ukuhlomisa zonke ezidingekayo asele yardage okuncane. Kulokhu, kuyinto efiselekayo kukhawulwe ubuncane ifenisha kunesidingo.
Futhi uma ngenhla saxoxa ngendlela ukuhlela lokulala izikwele 12 nokuningi, lokulala, encane nge imitha, ke kudinga ikhono kakhudlwana.
Yiqiniso, uzodinga encane amatafula eliseceleni kombhede, uma kunesidingo ithebula wokudonsa phandle, encane, kusofa ezihlangene. Yakhe ingena esikhundleni ngokuphelele commode ne isivalo ensikeni, noma ngisho ingxenye iKhabhinethi.
Ishadi Lezingubo Engingazigqoka - ifenisha kudingekile egunjini lokulala, kodwa kungcono ukuthenga imodeli encane nge esibukweni iminyango, okuyinto zibukeke ukwandisa isikhala egumbini. Uma ulandela imithetho feng shui, give up the big esibukweni ekamelweni. Ukwandisa isikhala ezibukwayo, ngaphezu esibukweni, ungasebenzisa izindonga egqamile futhi ifenisha.
Kahle kahle, iKhabhinethi Kunconywa ukwakha ikhefu udonga. Ngokuvamile, niche - ekahle kakhulu isitoreji kanye nezincwadi.
Ngo ekamelweni elincane izinto ezahlukene, sebenzisa emashalofini ukuthi anamekwe odongeni. izihlalo eziningana Ottoman ngempumelelo esikhundleni - bayohlala ugcine amavidyo bese wengeza induduzo.
Qaphela imibala. Ubuningi ezimhlophe okumsulwa engathandeki, kodwa futhi imibala emnyama futhi elikhanyayo akufanele uphathwe kabi. Zama ukusebenzisa mnene iyashintsha iyaphupha ibe shades, ekukhipheni ukukhanya yabo noma nangezindlela elikhanyayo.
Imibala egqamile elingaphakathi kanye ngangokunokwenzeka kuzokhulisa isikhala egumbini. Ngaphezu kwalokho, amakamelo encane akudingeki izilenge esindayo futhi izakhi eziningi lokubhalela. Konke kufanele kube ngokulinganisela futhi zizwakale kahle.
Ngakho, esihlokweni, sakhuluma ngokuthi indlela ukuhlela lokulala. 9 amamitha noma ngaphezulu akunandaba uma indlela yokudala ukuze inqubo. Into eyinhloko okufanele icatshangelwe zonke izinketho for ukubekwa efanele ifenisha, bese kuleli gumbi uyonika inkosi yayo nje nokuphumula nokulala enempilo.
Izakhiwo parametric emaqaqasini
Izinketho ezingokwezifiso Wallpapering emagumbini ehlukene
Emathileyi of kwagcizelela amanzi ukhonkolo: Izici